Bayern Munich oo Sanadka Cusub Guul Darro Ku Bilowday Horyaalka Jarmalka – Radio Muqdisho
Bayern Munich oo Sanadka Cusub Guul Darro Ku Bilowday Horyaalka Jarmalka
Kooxda Bayern Munich oo hogaamineysa horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ayaa guul darro ku bilowday sanadka 2015,ka dib markii ay 1-4 uga badisay kooxda Wolfsburg oo kaalinta labaad uga jirto horyaalka Jarmalka.
Labadan kooxood ayaa waxaa ciyaaray kulankii ugu horeeyay ee horyaalka Jarmalka ee sanadka 2015.
Kooxda Wolfsburg oo lagu ciyaarayay garoonkeeda Volkswagen Arena ayaa qeybtii hore ee ciyaarta labo gool la hor martay,waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Bas Dost,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii la isku laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxaa mar kale kooxda Wolfsburg labo gool oo kale u dhaliyay ciyaaryahan Kevin de Bruyne.
Ciyaaryahan Juan Bernat ayaa goolka kaliya u dhaliyay kooxda Bayern Munich.
Kooxda Bayern Munich ayaa horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ku hogaamineyso 45-dhibcood,halka kooxda Wolfsburg oo kaalinta labaad ku jirto ay leedahay 37-dhibcood.